Kooxda Real Madrid oo isku daraysa Dani Ceballos iyo 45 milyan oo gini si ay u hesho xiddig ka dheela Premier League – Gool FM
Sevilla oo Manchester United kala heshiisay soo qaadashada Anthony Martial… (Heshiis noocee ah ayuu ugu dhaqaaqay Spain?)
Kooxda Real Madrid oo isku daraysa Dani Ceballos iyo 45 milyan oo gini si ay u hesho xiddig ka dheela Premier League
Haaruun June 19, 2019
(Madrid) 19 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay 45 milyan oo gini iyo Dani Ceballos isku dareyso si ay u hesho xiddig ka xamaasha horyaalka Premier League.
Wargeyska The Sun ayaa daabacay in kooxda Real Madrid ay qarka u saaran tahay inay Tottenham u bandhigto dalab ku kacaya 45 milyan oo gini oo u dhiganta 56.5 milyan oo dollar oo lagu daray Dani Ceballos si ay uga helaan xiddigooda Christian Eriksen.
Xiddiga xulka qaranka Denmark ee Eriksen ayaa la soo jeediyey inuu ka fikirayo inuu ka tago xagaagan kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London, kaddib markii kooxda gaartay Final-ka Champions League ay ku guuldarreysatay inay heshiis cusub ka saxiixato.
Dhinaca kale Dani Ceballos ayaan sidoo kale wax qarsoodi ah ka dhigin xaqiiqda ah inuu doonayo inuu ka soo baxo garoonka Santiago Bernabeu, waxaana lagu soo waramayaa inuu xiiseynayo Macallinka Spurs ee Mauricio Pochettino.
Meeqa Milyan ayuu ku kacayaa dalabka ay kooxda Manchester City ka gudbinayso Kalidou Koulibaly?
RASMI: Kooxda AC Milan oo Macallin cusub Magacaabatay